I-BR yangasese ekhangayo | Imizuzu engu-10 yokushayela kusuka eDowntown - I-Airbnb
I-BR yangasese ekhangayo | Imizuzu engu-10 yokushayela kusuka eDowntown
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Olu
Leli yikhaya lesimanjemanje elisanda kwakhiwa elingu-2 elinefenisha enhle ngesitayela sesimanje/esincane!
Ikhishi elivulekile elinamatafula e-Quartz, lilungele ukupheka nokubungaza.
Igumbi lokuphumula elithokomele eline-Smart TV nekhono lokuphumula.
Imizuzu engu-10 nje ukusuka edolobheni i-Indy iyindawo ekahle kakhulu kokubili ezokuzilibazisa nezomsebenzi. Usondelene ngokwanele ukuhlola idolobha, ujabulele izindawo ezithandwayo edolobheni, ubuke umdlalo e-Lucas oil Stadium, futhi ubuyele ekhaya elifudumele elizolile.
Leli yikhaya lesimanjemanje elisanda kwakhiwa elingu-2 elinefenisha enhle ngesitayela sesimanje/esincane! Ukungena okuncane kukakhiye ngakho kuhle ukungena okulula.
Izivakashi zingasebenzisa ikhishi elivulekile elinamatafula e-Quartz. Ikhishi linezimbiza, amapani, imimese, i-Dood-Ware, i-Double-Oven,... umsebenzi! Indawo ekahle kakhulu yokuxoxa, yokudla, yokupheka, nokuningi.
Phumula egumbini lokuphumula elithokomele nge-Smart TV. I-Netflix, i-Hulu, i-Amazon Prime Video kanye nekhono lokuphonsa noma yini oyifunayo efonini/ku-laptop yakho, vele uxhume ku-WiFi. I-soundbar enhle eguqula okokuzithokozisa kwakho kokubuka. Futhi indawo ekahle kakhulu yokungcebeleka emculweni noma ekuthulekeni.
I- yakho iseduze kakhulu:
Imizuzu engu-10 nje ukusuka edolobheni i-Indy iyindawo ekahle kakhulu kokubili ezokuzilibazisa nezomsebenzi. Usondele ngokwanele ukuhlola idolobha kalula. Uzoba amamayela angu-3 kuphela ukusuka edolobheni, amamayela angu-2.5 ukusuka e-IUPUI & i-Indianapolis Motor Speed Way namamayela angu-2 ukusuka e-Eskenazi Hospital. Jabulela izindawo ezithandwayo edolobheni, ubuke umdlalo e-Lucas oil Stadium, bese ubuyela ekhaya elifudumele elizolile.
I-HDTV engu-65" ene- I-HBO Max, Disney+, I-Amazon Prime Video, Apple TV, I-Netflix
Indawo entsha sha eseduze kakhulu nenkaba yedolobha. Ngomlando othakazelisayo, umakhelwane oseduze umkhulu ukuwuhlola futhi! Isigodlo se-Central State kanye nomnyuziyamu wezokwelapha wase-Indiana kuqhele ngebanga elihle lasehlobo
Ngizotholakala ngocingo noma ngomyalezo ukuphendula noma yiziphi izidingo zakho. Nakuba ngizimisele ukubungaza nokukhuluma nawe, ngingakunikeza nendawo yakho njengoba ngifuna.